Xisbiga EPRDF ee Ethopia oo Qurshaynaaya isbadal Siyaasadeed – Xeernews24
Xisbiga EPRDF ee Ethopia oo Qurshaynaaya isbadal Siyaasadeed
2. Oktober 2016 /in WARAR/NEWS /von admin
Ururka EPRDF, oo in badan ku ballan-qaaday isbadal baaxad weyn, ayaa laga filaya isku-shaandhayn lagu sameeyo qar ka mid ah xisbiyada uu ka kooban yahay ururku.
Xisbiga ANDM ee haya talada ismaamulka Axmaarada ayaa sheegay in isku-shaandhayn lagu sameynayo maamulka gobolka iyo xisbigaba si loo wajaho cabashooyinka dadweynaha iyo kacdoonka ka jira halkaas. Isbadalka ururka ayaa la rajaynayaa bishan aan ku jirno.
War-murtiyeed ururku la wadaagay qaar ka mid ah saxaafada dalka ayaa lagu xusay in masuuliyiin sarsare ay qayb ka yihiin rabshadaha gobolka ragaadiyey ee lagu barabixiyey dadka ka soo jeeda Qomiyada Tigreega. Warka laguma soo qaadin dhibaatada shacabka Axmaarada soo gaadhay. Gobolka ayaa ahaa xudunta kacdoon dadweyne oo lagu diidan yahay dawlada oo billahan ka socday halkaas.
TPLF oo ah xisbiga haya talada gobolka Tigreega ayaa la hadal hayaa in uu sameeyo isbadal la mid ah ka laga dhawrayo ururka Axmaarada.
Waxaa xusid mudan, in TPLF xal u wayday khilaaf la sheegay inuu ka jiro gudaha xisbiga markii ay todobaadkii hore shirka ku yeesheen Maqale. Hadal kooban oo uu sheegay ururku ayaa lagu tilmaamay in xal loo heli doono mushkilada xisbiga gudahiisa ka jirta, balse faahfaahin dheeraad ah lagama bixin sida xalku ku imanayo iyo goorta la filayo toona.
Ra’isulwasaaraha Itoobiya ayaa wakhti aan saas u sii fogayn ku eedeyey masuuliyiinta labada maamul in ay ku guuldareysteen wax ka qabashada arrinta Wolqayta oo ah halkii rabshaduhu ka curteen.
Xukuumada Itoobiya ayaa la tacaaleysa kacdoon shacbi oo rabshado wata; amar-diido ay shaqaalaha dawlada iyo shacabku sameeyeen iyo abaartii ugu xumayd ee wadanka soo marta muddo 50-sano ah.
Dadka adaroosa siyaasada wadanka ayaa saadalinaya in isbadalada EPRDF ayna qancin doonin shacabka maadama weli laga maaganayo in wax laga qabto xubnaha sarsare ee fartu ku godan tahay.
Dadweynaha Itoobiya ayaa isbadalada ku sifeeyey maahmaah xabashi ah oo tidhaahda, Hadii dhardhaarada dhariga la kala badalo dhuunigu ma macaanado”; taas oo loola jeedo in isbadalka noocaas oo kale ahi uuna xal horseedi karin.
Qaar ka mid ah warbaahinta dalka ayaa sheegtay in isku-shaadhayntu ay saamayn karto masuuliyiin sarsare, balse way adag tahay in la saadaliyo cida ay seeftu dul saaran tahay.
EPRDF ayaa waxaa ku bahoobay 4 xisbi oo matala qoomiyadaha ugu saamaynta badan Itoobiya oo kala ah Tigreega, Axmaarada, Oromada iyo qoomiyadaha shucuubta koonfureed.Waxaa jira dareen guud oo dalka ka jira oo lagu eedeynayo in xisbiga TPLF iyo qoomiyada Tigreegu talada dalka maroorsadeen, laakiin xukuumada EPRDF ayaa aragtida noocaasa gaashanka ku dhufata.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2016/10/images.jpg 192 263 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2016-10-02 10:04:372016-10-02 10:04:37Xisbiga EPRDF ee Ethopia oo Qurshaynaaya isbadal Siyaasadeed
Waa kuma ninka looga Dambeeyo Arin Kasta oo ku saabsan Gobolka Salal Qaybti... Dawasho Wacan Dagaalka Suuriya iyo Hubka shacabka loo adeegsan